Gao Fu, National Center for Disease Control and Prevention: Denda rinongori bhomba reutsi. Covid-19 inogona kunge iripo makumi emakore apfuura.
Musi waGunyana 25, 2021, maererano nezvakataurwa naGao Fu, director weChina CDC muZhongguancun Forum, kupararira kwedenda reCCIDID-19 kunofanirwa kutorwa se "grey rhinoceros" chiitiko munyika, uye hazvisi izvo. chiitiko che "black swan". Maererano ne ...
Kuongororwazve kweropa reItaly: Covid-19 inogona kunge yakapararira muItari muna Gumiguru wegore rapfuura
Sekureva kwenhau dzekune dzimwe nyika dzemusi wa20, marabhoritari maviri ekuEurope achangobva kuongororazve masampula eropa akaunganidzwa neNational Cancer Center muMilan, Italy, COVID-19 isati yatanga, uye mhedzisiro yakaratidza kuti Covid-19 inogona kunge yakapararira muItari. kutanga kwaGumiguru 2019. Asi tsvaga ...
Mishonga miviri mikuru muUnited States yakatarisana neDelta strain: yakadziviswa, asi haina kudzivirirwa zvachose! Asi zvakare fumura hurema hutsva
Sekureva kwemishumo yenhau dzekunze nguva pfupi yadarika, kusvika pari zvino, vanhu vanosvika mazana matanhatu nevasere vakabayiwa nhomba vakafa mushure mekubatwa nekoronavirus. Kureva kuti, kunyangwe ukabaiwa neCCIDID-19 yekudzivirira, zvinokwanisika kutapukirwa zvakare uye kufa. Zvinoenderana nedata nyowani kubva kuCenters ...
Simudza Dombo uzvirove mutsoka! Kekutanga, United States yakabvuma kuti vatambi vemauto vaifungidzirwa kuti vakatapukirwa neCOVID-19
na admin pa 21-07-27
[Southern+June 24th] Sekureva kwenhau dzeRussia, United States yakabvuma kekutanga kuti vatambi vemauto eAmerica vakafungidzira zviratidzo zveCCIDID-19 panguva yeWuhan Military Games muna 2019. Sekureva kwemishumo, muna Gumiguru 2019, vangangoita zviuru gumi zvevatambi vekunze. kubva kupfuura 100 ...
na admin pa 21-07-12
Iyo sequelae yeCCIDID-19 yatekeshera, uye kudiwa kwekuisirwa mapapu muUnited States kuri kuwedzera
na admin pa 21-07-02
Intensive care unit yeCalifornia Medical Center. ABC News yakashuma kuti Joshua Garza, murume ane makore makumi mana nematatu okukura anobva kuTexas, akaisirwa mapapu maviri nekuti aive atapukirwa neCOVID-43. Akafunga kuti aisada kubaiwa nhomba yeCOVID-19. Zvino, akadana vanhu kuti vabaiwe, ...
Zvikonzero zvitatu zvekupfeka masiki mushure mekudzivirira neCOVID-19-19 yekudzivirira
na admin pa 21-06-21
Kwemwedzi yakawanda, wanga uchiraira kutora, kudzima zvirongwa zvako zvekufamba, uye kushamwaridzana kuburikidza nemagetsi skrini. Unogona kufara kana ukaona kuti unogona kusununguka mushure mekubaiwa nhomba yeCOVID-19-19. Nekudaro, zvinhu hazvisi nyore ... "Pfizer's uye ModernaR...
Huwandu hwekudzivirira muUK hunosvika makumi matanhatu muzana, uye zvichiri kunetsa kumisa kupararira kwehutachiona hwakashandurwa.
na admin pa 21-06-11
Sekureva kwehupoti yehutsika, COVID-19 yakadzikira zvishoma muGermany nguva pfupi yadarika. Kubva pamazuva mapfumbamwe, huwandu hwehutachiona muGermany hwadzika kusvika pamakumi maviri nematatu mumazuva manomwe apfuura. Nyika dzemubatanidzwa dzakaunza akati wandei matanho ekusunungura, sekutangazve dzidziso yakatarisana, kubviswa kwe ...
Mhosva dzinopfuura mazana matatu ezviuru dziri kuwedzera, chitunha chaoma mitezo, okisijeni yave kupera, uye India yave nzvimbo yedenda repasi rose (COVID-19)
na admin pa 21-04-26
Nguva pfupi yadarika, mamiriro edenda pasi rese aita kunge agadzikana, asi imwe nyika ichiri kushata, paine zviitiko zvinopfuura mazana matatu ezviuru zviri kuwedzera, uye hutano hwenyika hwave pedyo nekudonha. Nyika ino - India. Pane kushomeka kwenzvimbo dzekupisira zvitunha nehuni i...
Save rechitatu redenda riri kuuya! Funga kuvhara guta zvakare?
na admin pa 21-03-29
Nekupararira kwehutachiona hwakashandurwa, chikamu chechitatu chedenda muEurope chiri kuuya. Nyika zhinji dzakatangazve matanho ekuvharisa. Gurukota rezvehutano reGerman rakataura musi wa27 kuti kutenderera kutsva kwe "kuvharwa kweguta" kuri kufungwa. Kubva musi wa27, huwandu hwenyaya nyowani dzakasimbiswa ...
Zhong nanshan: haigone kubvisa shasha itsva asi inogona kudzorwa
na admin pa 21-03-08
Hapana nyika iri mukudzivirira uye kutonga kwedenda inogona kuva nayo. Mukupera kwaKurume 2, semina yepasirese yenyanzvi yekudzivirira nekudzora denda, zhong uye nevanozivikanwa veAmerican chirwere chetachiona fauci waya, vanokurukura nyaya dzakadai sekubatana kwezvirwere pasi rese. Zho...
TERRIBLE COVID-19: Iran aimbove vatengesi vemamina epasi rese vakafa nekuda kweCCIDID-19, aine makore makumi mana nemashanu.
na admin pa 21-02-02
Sekureva kweIran's islamic republic news agency yakataura kuti vaimbove vatambi vechikwata chenhabvu cheIran vanogona kutora vatengesi nekuda kweCOVID-19 pneumonia muna Ndira 21, chipatara chakaendeswa kuguta guru, Tehran. Pa 27 Ndira manheru, vatengesi vemina vakafa mushure, pazera ...